Miriam Makeba: Ilay fihodinana fanaovam-beloma farany ataon’ilay ‘diva’ tian’ny olona indrindra ao Afrika · Global Voices teny Malagasy
Miriam Makeba: Ilay fihodinana fanaovam-beloma farany ataon'ilay ‘diva’ tian'ny olona indrindra ao Afrika
Voadika ny 10 Oktobra 2018 2:37 GMT
Hamarana ireo taona nihirany ireo amin'ny alalan'ny fiodinana fanaovam-beloma farany haharitra 14 volana mba hisaorana ireo mponina tany amin'ny firenena nisehoany nandritra ny asany naharitra 40 taona mahery, izay mbola mampientana ihany eo amin'ny faha-73 taonany i Miriam Makeba . Hitsidika firenena maro araka izay azony aleha i Miriam Makeba na i Mama Africa, araka ny fiantsoana azy amim-pitiavana, ary vao haingana no nampanantena ny mpihaino tany Kioba izay namaritan'ny tsikera ny kaonseritra nataony ho toy ny ’tsy azo adinoina sy feno talenta tapitr'ohatra’.
Nitombo tamin'ny fihainoana sy fitiavana an'i Miriam Makeba sy ny feony mahafinaritra aho; ‘Pata Pata’ no hirany tena tiako indrindra tamin'izaho mbola zaza, (midika ‘kitika’ ny hoe ‘pata’ amin'ny teny Zolo). Ela taty aoriana aho vao tonga saina fa tena nisy fiantraikany maneran-tany ny mozikany. Fantatra manerana ny kaontinanta afrikana ny hirany ‘Malaika’ (anjely amin'ny teny Kiswahili) ary nanome aingam-panahy ho an'ny artista Afrikana maro ny mozikany; ny tena malaza indrindra angamba dia i Angelique Kidjo. Ny zavatra tena nahagaga ahy dia ny fahafahany manafangaro ny mozika Afrikana sy ireo endrika mozika hafa mba hamoronany ny tena fiangaly mampiavaka azy manokana. Mihira amin'ny teny Afrikana maro ihany koa izy izay ahitana ny Kiswahili, Shona, Bambara sns… ary koa ny teny Arabo, Frantsay sy Portiogey.
Na dia hanohy ny hirakitra hira aza izy, azo antoka fa ity no faran'ny vanim-potoana mahagaga ana mpanakanto iray izay tena manana tantara malaza ny fahombiazany. Tany amin'ny taona 80 tany, nanatrika ny fampisehoana iray nataon'i Miriam Makeba aho tao Londona; tena nahatalanjona ny heriny sy ny hasoany tamin'iny alina iny. Tsara tarehy ary tena bikanà ary tao anatin'ny roa ora monja nanaovany fampisehoana, in-efatra nanova ny akanjony izy, izay akanjo vaovao tsaratsara kokoa noho ny teo aloha foana.
Noroahana tao Afrika Atsimo nandritra ny 30 mahery noho ny fahasahiany niresaka sy nihira momba ny fanavakavahana ka nahatonga azy tsy maintsy nandeha niaina an-tsesitany i Miriam Makeba, izay teraka tany amin'ny kaominina iray tao Johannesburg, toerana izay niasan’ ny reniny ho mpanampin'ireo fianakaviana olona fotsy. ”Tsy mihira momba ny politika aho. Mihira ny fahamarinana no ataoko,” hoy izy tamin'izany fotoana izany.
Ankoatra ny famokarany rakikira maro, mirotsaka anaty hetsika ho an'ny mahaolombelona ihany koa i Miriam Makeba, toy ny maha-Masoivohon'ny FAO (Fikambanana Ara-Tsakafo sy Fambolena ao amin'ny Firenena Mikambana) azy. Nandritra ny sesitaniny tany Gineana, izay toerana naha-solotena Gineana azy tao amin'ny Firenena Mikambana (FM), noresahany tamin'ny Fivoriamben'ireo firenena mpikambana ao amin'ny FM ny momba ny fanavakavahana. Nanangana ny Foibe Makeba Fanarenana ny Zazavavy ihany koa izy, foibe miasa miaraka amin'ny ankizy eny an-dalambe izay hifantohan'ny heriny rehefa vita ilay fihodinana hataony.
Masoivoho lehibe indrindran'ny mozika Afrikana i Miriam Makeba, mpanakanto miavaka izay namakivaky taompolo maro ny mozikany.